I-Professional pcs ye-8 yama-brush iso isethi China Manufacturer
Incazelo:I-Professional Eye Brush Set,8 I-Pcs Isethi Yebhulashi Yeso,Isethi Yesibukeli Seso
Home > Imikhiqizo > Setha ukusetha > 8pcs Ukusetha kwe-Brush > I-Professional pcs ye-8 yama-brush iso isethi
I-Model No.: YC050
I-PEREMIUM BRUSH SYNTHETIC: Amabhulashi ngamunye ahlangene ngesandla futhi ahlanganiswe ngamunye. Ukwenziwe ngezinto zokwakha ze-fibre premium zinikeza ukuthinta okungathandekayo nokuzizwa, kuzobonisa ubuhle bakho bemvelo bese ushiya ukuphela okungenasici
IMISEBENZI YOKUPHILA KWAMAKHAYA: Lezi zibhamu ezibucayi ezibaluleke kakhulu zenzelwa uketshezi, ama-powders, noma ama-creams ukuze kuvezwe isicelo esihle sokwenza iso. Isethi ibandakanya ukuthungwa kwamehlo esithunzi, isisekelo sebhayisiki, isibhamu se-eyeliner, i-mascara shayela, i-lip brush, i-concealer brush, i-eyebrow ibhulashi yokusetshenziswa kwansuku zonke.
I-SOFT AND HEIGHT APPROPRIAT: Zonke izibhamu zilula kakhulu futhi zilula ukuzenza izimonyo, zilungele ukuzenzela abesifazane kanye nabantu abanesikhumba esivamile futhi ngeke bakucasule.
UKUKHULULEKA: Ungadonsi noma ungenise noma yiliphi i-pigment.
Inombolo yesibonelo : YC050
Inani: 8 Ama-Pcs / isethi
I-Professional Eye Brush Set 8 I-Pcs Isethi Yebhulashi Yeso Isethi Yesibukeli Seso I-Professional Brush Set I-Professional Makeup Brush Set I-Professional Face Brush I-Professional Makeup Brush Kit I-Professional Make Up Brushes